Golaha naafada qaranka oo kulan muhiim ah yeeshay | Dalka Times - News and Politics
Home WARKA Golaha naafada qaranka oo kulan muhiim ah yeeshay
Xubno katrisan qeeybaha kaladuwan golaha naafada qaranka ayaa kunlan aan caadi aheyn ku yeeshay magaalada Muqdishu. Kulanka ayaa waxaa kasoo qeeyb galay xubnaha golaha iyo qaar kamid gudoonka xilkooda u dhamaday. Wadahal iyo wadatashi dheer oo ku sabsan xaalada dadka naafada iyo dib u dhiska golaha waqtigiisa dhamaday
Xubnaha kasoo qeeyb galaya ayaa si weeyn uga dooday firaaqa mudada dheer qaatay ee gudoonka xilkodaya dhacsanyahay, dib u soo doorasho xubnaha naafada eek u metela dadka naafada golaha naafda iyo abaabulka doorashada gudoonka sare ee golaha.
Golaha ayaa ka dooday xaalada dadka naafada somaliyed gaar ahaan xiligan bisha barkeysan ee soonka oo jirto afurka dadka naafada oo gabis ah si kaduwan sanadahi hore. Dadka naafada yaa heli jiray afur ay ka faaideystaan dad badan ila 4 kun oo qooys. Balse sanadahan dambe ay darmeyan in dadka naafad ay sarantahay xanibad dhanka afurka
Hayada gargaarka iyo kuwo afurka ka bixya gobolka banadir ayaa dadka naafada u deeyriye waxaana ay shegeyn qarkamid in dhaman kaalmada afurka ay ku warejiyeen maamulka gobolka banadir oo qorshe u sameyo gaarsiinta dadka ku haboon.
Dadka naafada yaa waxaa cabasho u direyn maamulka gobolka banadir Gudomiye Cumar Maxamud Cumar in uu dadka naafada ka qeeyb geliyo qorshaha afurka. Iyo in dadka naafada ay cabasho ka yahiin dad markasta arimaha naafada is dabamareyo oo naafada magacooda sheegto. M
Dadka naafada ayaa waxaa ay cabsho u direyn wasaarada mareynta masiibada oo gargaarka dadka naafada wasaarada ay siinjiretey sanadkan aysan helin. Iyo wasaarada maamulkeeda qaarkamid oo ashqaas aan naafada metelin xiriir la leh halkaa oo anan dadka naafad wax lsoo garsiin. Waxaana ay uga digeyn wasaarada in dadka naafada ula shqeyso sidii hore oo kale.